Intlanzi yeGurami Pearl | Ngeentlanzi
Intlanzi yeGourami Pearl
Los ipearl gourami yentlanzi, ezaziwa ngegama lazo lezenzululwazi iTrichogaster leeri, zizilwanyana ezinomzimba oxineneyo emacaleni azo, ezineprofayile ye-oval kunye nobude obukhulu xa zihlala ekuthinjweni ngaphezulu okanye ngaphantsi kweesentimitha ezili-10 okanye ezili-11. I-pearl gourami inombala omthubi ngokubanzi otyheli, othi kubantu basetyhini ujike isilivere emqaleni kunye nakwindawo esiswini. Banomgca omnyama obaleka kubo ukusuka empumlweni ukuya kwisiseko somsila wabo. Njengazo zonke iintlanzi ze-gouram, amaphiko e-ventral aguqulwa aba zii-appendages ezimbini, okanye iindevu ezinomsebenzi wokuchukumisa.
Ezi zilwanyana zizalelwa kumazwe afana neThailand, iSumatra neBorneo, apho zihlala zihlala ngokwamaqela amakhulu. Nangona kunjalo, banokubonakala bedada bodwa ngexesha lokuzala. Ezi zilwanyana zikhetha amanzi ahamba kancinci agqunywe zizityalo ezingaphantsi kwamanzi. Kubalulekile ukugcina engqondweni ukuba, ukuba sifuna ukuba nazo iintlanzi ekhaya, sifuna ii-aquariums ezinkulu, ezingaphezulu okanye ngaphantsi kweesentimitha ezingama-50 okanye ezingama-60 ubude, ezinomthamo ongaphezulu kweelitha ezingama-70.
Amanzi kufuneka angathathi hlangothi okanye i-alkaline encinci, kufuneka sibe nezityalo zomhlaba ezaneleyo, amatye kwaye singakhanyisi kakhulu. Ngokufanayo, kubalulekile ukuthathela ingqalelo iifayile ze- ukuhluza kunye nobushushu, kuba eyokugqibela kufuneka ibe phakathi kwama-25 nama-26 degrees celcius, nangona kufanele kuqatshelwe ukuba le pearl gourami inokunyamezela umahluko phakathi kweedigri ezingama-22 ukuya kuma-30.
Ewe ukondlaEzi zilwanyana zamkela ukutya okomileyo, ukuba nje zihlanjwe kakuhle, kodwa kufuneka zondliwe ikakhulu nge-daphnia, brine shrimp, imibungu yokubhabha kunye nokunye ukutya okuphilayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Intlanzi yeGourami Pearl
Ndine-pearl yebhinqa kunye neBeta kunye nembewu ezimbalwa kwaye kubonakala kum ngathi iperile ayityi kakuhle nangona inkulu kakhulu, iyacotha xa kufikwa ekutyeni.